Roma oo albaabada u furtay Radja Nainggolan si uu kooxda kaga dhaqaaqo – Gool FM
Roma oo albaabada u furtay Radja Nainggolan si uu kooxda kaga dhaqaaqo
(Roma) 13 Juunyo 2018. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Roma Monchi ayaa albaabada u furay Radja Nainggolan si uu kooxda kaga dhaqaaqo, si dib loogu soo celiyo wada hadalada Inter iyo Roma markale.
Wararka ayaa waxay xaqiijinayaan in Agaasimaha ciyaaraha kooxda Roma Monchi uu ku daalay hab dhaqanka Radja Nainggolan, maadaama 30 jirkan reer Belgian uu habeenkii ilaa iyo xili dambe ku gaaro baashaal iyo sigaar cabid.
Sidaas darteed Monchi ayaan wax dood ah ka qabi doonin hadii uu laacibka reer Belgian ee Radja Nainggolan uu ka dhaqaaqo kooxda ka dhisan caasimada Roma.
Inter ayaa ah kooxda ugu cad cad ee xiiseeneysa saxiixa xidigan reer Belgian, kaasoo aanu kusoo bixin liiska xidigaha xulka qaranka Belgian ee ka qeyb gali doona koobka aduunka 2018.
Inter ayaa haatan dib ugu laaban doonta wada hadalada ay ku dooneyso saxiixa Radja Nainggolan, kadib marka ay xaqiisay Nerazzurri in xili ciyaareedka soo aadan ay qeyb ka noqon doonto tartanka xiisaha badan ee Champions League.
RASMI: Atletico oo heshiis cusub ka saxiixday xiddigii diirada u saarnaa Real Madrid ee Jose Gimenez